Miyirka Qashinka iyo Quruxda Nadiifka ah - Xarunta EcoTechnology
Anigoo ah qof jecel moodada iyo quruxda, waxaan fahamsanahay xiisaha qurxinta iyo alaabada kale ee daryeelka shaqsiyeed. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa inay jiraan laba arrimood oo ifaya marka ay timaaddo alaabada quruxda - qashinka ay u horseedaan iyo adeegsiga maaddooyinka aan caafimaad qabin ee qaacidooyinka wax soo saarka.
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso- miyaanay jirin xeerar kaa hortaagan? In kasta oo Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka uu talooyin u soo jeediyo shirkadaha, awooddeeda ayaa xaddidan (Jiilaal). Kormeerku wuxuu sidaas ku dhacaa garbaha soo -saarayaasha. Waxaa laga yaabaa inay aad uga welwelsan yihiin faa'iidooyinka oo ay ku mashquulaan inay adeegsadaan farsamooyinka “cagaar -caynta” iyagoo ilaalinaya qaaciidooyinka caafimaad -darro (Riccolo). Waxyaabaha ay ka kooban tahay ayaa sidoo kale walaac leh sababtoo ah nijaasta suurtagalka ah. Tusaale ahaan biraha, waxaa laga helay alaabaha la isku qurxiyo. Waxay suurtogal u noqon karaan inay waxyeello u geystaan ​​maadaama ay ku urursan karaan jirka sanado badan (Bocca et al). In kasta oo ay run tahay in maaddooyinka dabiiciga ah ay sababi karaan fal -celin xasaasiyadeed iyo xiriir dermatitis, haddana isla halista ayaa quseysa badeecadaha caadiga ah (de Groot et al., Pan et al). Quruxda nadiifta ah ayaa markaa ah doorashada ugu fiican iyada oo ay ugu wacan tahay isbarbar dhig ahaan togan ama dhexdhexaad ah oo ku aaddan ladnaanta qofka.
Waxaa laga yaabaa in magacyada daryeelka shaqsiyeed ee aad ugu jeceshahay ay iyaguna sheegtaan ku saabsan qaacidooyinkooda qayb ahaan ama gebi ahaanba dabiiciga ah.
“Quruxda nadiifka ah” waa mid faa’ido leh waxayna kaga duwan tahay alaabooyinka quruxda caadiga ah in ay u adeegsato waxyaabaha dabiiciga ah ugu horrayn samaynta alaabta. Si loo raaco sawirkooda cagaaran, shirkaduhu waxay suurtogal u noqon karaan inay adeegsadaan dhaqammo iyo agab waara oo keliya marka ay timaaddo badeecadda laakiin sidoo kale marka la eego baakadeeda. Kani waa doorasho la mahadiyo iyada oo la tixgelinayo in qashinka balaastigga ah ee badan uu ka yimaado “aaladaha dalabka iyo weelasha” loo isticmaalo qurxinta (Baczkowska). Warshadaha baakadaha la isku qurxiyo waa behemoth; sanadka 2018 waxay u qalantay $ 25.9 bilyan (Drobac et al). Caagagga ayaa ka badan kala bar warshadaha baakadaha la sheegay (Drobac et al). Baaxadda balaastigga la tuuro ayaa ah dhibaato marka ay timaaddo quruxda si la mid ah sida ay dhibaato u tahay marka ay timaaddo qaybaha kale sida baakadaha cuntada iyo cabitaanka.
Waxaa laga yaabaa inaad dareento in xaqiiqooyinkani ay ka dhigan yihiin wicitaan ficil. Hadday sidaas tahay, sii akhri si aad wax uga barato siyaabaha aad quruxdaada joogtada ah uga dhigi karto qashin iyo miyir -qab caafimaad!
Soo iibso aalad wax lagu xoqo oo waarta ama nooleyn karta. Iibso EcoTools 'buraashka wejiga dib loo warshadeeyay, ama alaab gacmeed laga sameeyay Etsy.
iibso wareegyo maro suuf ah oo dib loo isticmaali karo. Habkan, ma tuuraysid tiro farabadan oo suuf ah mar kasta oo aad iska saarto qurxintaada. Maskaxda ku hay in suufku sidoo kale yahay wax aan aad u tayo badnayn oo la soo saaro.
U fiirso waxyaabaha ku jira daryeelka maqaarkaaga si aad u eegto maqaar aad u fiican iyo caafimaad kordhay. Eeg fiidiyaha Maqaarka Kooxda Shaqeynaya Deegaanka keydka macluumaadka oo wax badan ka baro waxyaabaha ku jira alaabta aad gaarto.
Ku dar timahaaga si aad u bacrimiso ama ugu deeq mashaariicda sida Barnaamijka Hirarka Nadiifka ah ee ka socda Mawduuca Kalsoonida. Barnaamijku wuxuu ururiyaa timo iyo fiiloyin si loogu isticmaalo waxyaabo ay ka mid yihiin boomsyada oo la shaqaaleeyo xilliyada shidaalka daata.
Halkii aad ka isticmaali lahayd burush timo caag ah, dooro mid baasaboor ah.
Iibso shaambooyada iyo waxyaabaha hagaajiya wax yar oo dib u warshadeeya baakad kasta markaad alaabta dhamaysato.
Ka dooro shaamboo adag iyo baararka qaboojiyaha halkii aad ka isticmaali lahayd dhalooyinka caagga ah ee badeecada dareeraha ah.
Tallaabada ugu horreysa uguna muhiimsan ee lagu yareynayo qashinka la xiriira qurxinta ee aad soo saarto waa inaad ka fogaato inaad iibsato qurxiyo badan. Waxaad kaydin kartaa lacag adiga oo aan si qasab ah wax u iibsan markasta oo uu jiro iib. Taa beddelkeeda, wax uun soo iibso marka aad u baahato oo isticmaal ilaa ay dhammaystirmaan.
Ka dib marka la dhammeeyo badeecadaha, fiiri haddii aad dib -u -warshadayn karto baakadooda iyada oo loo marayo barnaamijyo lala yeesho ururro sida TerraCycle.
Haddii aad leedahay indho -indhayn gabowday, tixgeli inaad ka samaysato mashruuc farshaxan oo aad u isticmaasho sawirrada.
Eeg haddii ay jiraan ikhtiyaarro la buuxin karo oo aad adeegsan karto, maaddaama magacyada quruxda ay shaqaaleeyeen ikhtiyaarkan goor dambe (Coelho et al).
Iska hubi badeecooyinka adiga oo isticmaalaya baakidhka noole, dibindaabin kara ama dib loo warshadeyn karo/dib loo warshadeyn karo.
Markay timaaddo in la yareeyo waxyaabaha la isku qurxiyo oo leh waxyaabo laga yaabo inay waxyeello u geysan karaan, waxaa laga yaabaa inay jirto qayb Qurux Nadiif ah oo ka mid ah dukaanka aad wax ka iibsanayso oo aad la tashan karto.
Qurxinta DIY ee fudud ee la isticmaalayo maaddooyinka dabiiciga ah waa ikhtiyaar kale.
Haddii aan tixgelinno daryeelka maqaarka, daryeelka timaha, ama qurxinta, warshadaha la isku qurxiyo waa inay ku xisaabtamaan soo saarista alaabada daryeelka shaqsiyeed ee aan caafimaadka u lahayn jirka aadanaha iyo Dhulka labadaba. Isbeddellada fudud ee tooska ah, waxaad ku yeelan kartaa wax -ka -beddel iyo kaalmo si ka sii wanaagsan!